Scribble 🥇 प्रविष्ट गर्नुहोस् र Emulator.online बाट मजा लिनुहोस्
Scribble । कुनै पनि भाषामा शब्दावली सुधार गर्ने काम भनेको समर्पण आवश्यक छ। के हुन्छ भने, यो गाह्रो कार्यलाई सहयोग गर्न, तपाईं रमाईलो र सुपर प्रतिस्पर्धी खेलको प्रेरणामा भर पर्न सक्नुहुन्छ? यो १ 1930 about० मा सिर्जना गरिएको एक अमेरिकी शब्द खेल, स्क्रिबलको बारेमा हो र त्यस पछि २२ भाषाहरूमा अनुवाद गरियो।
स्क्रिबल: कसरी चरण-दर-चरण खेल्ने?
खेल्नु ब्याकगामोन अनलाइन नि: शुल्क, मात्र यी चरण-देखि-चरण निर्देशनहरू पालना गर्नुहोस् :
चरण 1 । तपाईंको मनपर्ने ब्राउजर खोल्नुहोस् र खेल वेबसाइटमा जानुहोस् emulator.online.
चरण2। वेबसाइटमा प्रवेश गर्ने बित्तिकै, खेल पहिले नै स्क्रिनमा प्रदर्शन हुनेछ। तपाईंले खेल सुरु गर्नको लागि नाम छनौट गर्नुपर्दछ। यदि तपाईं चाहनुहुन्छ भने, तपाईं छवि पनि रोज्न सक्नुहुन्छ। "क्लिक गर्नुहोस् खेल्नु" र तपाइँ खेल्न सुरू गर्न सक्नुहुन्छ, मेशिनको बिरूद्ध खेल्न रोज्नुहोस् वा एक वा बढी साथीहरूको बिरूद्ध खेल्नुहोस्।
3 कदम। यहाँ केहि उपयोगी बटनहरू छन्। तिमी सक्छौ " आवाज थप्नुहोस् वा हटाउनुहोस् ", थिच्नुहोस्" प्ले "बटन र खेल सुरु गर्नुहोस्, तपाईं सक्नुहुन्छ" रोक्नुहोस् "र" फेरि शुरु गर्नु "कुनै पनि समयमा।
4 कदम। खेल जित्न तपाईंले बोर्डमा शब्दहरू बनाउनुपर्नेछ। प्रत्येक अक्षरको स्कोर हुन्छ । जसले खेलको अन्त्यमा सबै भन्दा बढि अंक प्राप्त गर्दछ उसले जित्छ।
5 कदम। एउटा खेल समाप्त भएपछि, क्लिक गर्नुहोस् "फेरि शुरु गर्नु" फेरि सुरु गर्न।
स्क्रिबल के हो?
स्क्रिबल एउटा बोर्ड खेल हो जसमा यसको खेलाडीहरू (२--2) गठन गरेर पोइन्टहरू थप्न प्रयास गर्छन् एक आपसमा जोडिएका शब्दहरू बोर्डमा अक्षर ढु stones्गा प्रयोग गर्दै विभाजित १२ वर्ग .
धेरै व्यक्तिहरू स्क्रिबलका आविष्कारकहरू हुन् भन्ने विश्वास गर्दछन् जेम्स ब्रुनोट र हेलेन ब्रुनोट , तर वास्तविकतामा यो उनीहरूको बिचार थिएन, बरु त्यो स्क्रिबलको आविष्कारक अल्फ्रेड बटनहरू हुन् , न्यू योर्क राज्यमा Puffkeepsie बाट एक वास्तुकार।
वर्ष थियो 1931 , र यस्तै धेरै नयाँ बेरोजगारहरू जस्तै, बट्ससँग प्रशस्त समय थियो। उसले एउटा नयाँ खेल ल्याउने निर्णय गर्यो जुन आंशिक भाग्यमा र आंशिक सीपमा निर्भर थियो।
अल्फ्रेड मोशर बट्स, उनले अंग्रेजी भाषामा कति पटक विशेष अक्षरहरू दिइन्थ्यो भन्ने हिसाब गर्न न्यू योर्क टाइम्स समाचार पत्रको पहिलो पृष्ठहरू पढ्नुभयो (तर उनले "एस" लाई कम गरे जसले गर्दा खेल सजिलो नहोस्), र प्रत्येकमा यसको दुर्लभताको आधारमा एउटा मान प्रदान गरियो।
कुनै बोर्डको आवश्यक पर्दैन किनकि टाईल्स क्रसवर्डको योजनाको अनुसार व्यवस्था गरिएको थियो। उनले यस खेललाई नाम दिए Lexicon .
उसको पेटेन्ट आवेदन स्वीकृत भएन, न त खेल निर्माणकर्ताहरू इच्छुक थिए, त्यसैले १ 1938 XNUMX मा उनले खेल थपेर एक परिमार्जन गरे १ x x १ board बोर्ड उच्च स्कोर वर्ग र एक संग सात-टाइल Lecttern (अझै पनी रहेका सुविधाहरू)। ।
उनले पनि नाम परिवर्तन गरे क्रिस-क्रसवर्ड्स , तर फेरि एक पटक प्याटेन्ट कार्यालय र खेल निर्माताहरू केहि पनि जान्न चाहँदैनथे। केही पूरा गरेपछि, उहाँ वास्तुकारको रूपमा अघिल्लो काममा फर्कनुभयो।
१ 1948 XNUMX मा, जेम्स ब्रुनोट , केहि खेलहरू मध्ये एकको मालिक, उनले भने कि यो सफलतापूर्वक मार्केट गर्न कोशिस गर्न तयार छ। प्रतिलिपि अधिकारको बदले, ब्रुनोटले प्याटेन्ट अधिकार प्राप्त गर्यो .
मैले पुरस्कार वर्गहरूलाई पुनः वितरित गरेको छु, नियमहरू सरलीकृत गरेको छु, र नाम परिवर्तन गरियो Scribble , जो त्यो वर्ष १ 1948 1953 र ग्रेट ब्रिटेनमा १ XNUMX XNUMX मा ट्रेडमार्क गरिएको थियो .
घरबाट काम गर्दै उनले १ 2,000 1949 in मा २,००० भन्दा बढी खेलहरू बेचे। १ 1952 XNUMX२ मा ब्रानोटले तौलियामा फ्याँक्दै गरेझैं शब्द छिटो छ र बिक्री पनि बढ्न थाल्यो।
ज्यासी स्ट्रॉस, मेसीको डिपार्टमेन्ट स्टोरमा प्रबन्धक, छुट्टीमा खेल्दा। जब उनी फर्किए, उनले खेल खेल विभागलाई उनलाई केहि पठाउन भने, तर कुनै स्टक थिएन।
मेसीले प्रमोशनल प्रयासहरूलाई समर्थन गर्न सुरु गरे, र किनकि ब्रुनोटले बढ्दो बिक्रीसँगै गर्न सकेनन, यसले उत्पादनलाई लाइसेन्स दियो सेल्चो र रेटर । संयुक्त राज्य अमेरिका, क्यानडा र अष्ट्रेलिया बाहिर अधिकार ब्रिटिश कम्पनी JW Spears लाई बेचियो। पेटेन्टको पहिलो ब्रिटिश अनुप्रयोग १ 1954 .XNUMX मा मात्र बनेको थियो।
अक्षरहरूको फ्रिक्वेन्सी र अक्षरहरू आफैं पनि फरक हुन सक्दछन् किनकी फरक भाषाहरूका लागि बिभिन्न संस्करणहरू आवश्यक पर्दछ (उदाहरणका लागि, स्पेनिशमा LL र CH अक्षरहरू छन्)। १०० मिलियन भन्दा बढी खेलहरू २ languages ​​भाषाहरूमा बिक्री भएका छन्। जेम्स ब्रुनोट १ 100। 29 मा र अल्फ्रेड बट्स १ 1984 1993। मा मरे।
नियमहरू जहिले पनि तपाईं कसको साथ खेल्नुहुन्छ भन्नेमा निर्भर गर्दछ र प्रायः पूर्ण रूपमा कहिले पनि लागू हुँदैन।
Scribble दुई देखि चार खेलाडीहरू बीचको नम्बरबाट खेल्न सकिन्छ .
त्यहाँ एक वर्ग बोर्ड छ को छेउमा १ squ वर्ग।
प्रत्येक प्रत्येक राउन्डका लागि सात अक्षरको हकदार हुनेछ।
खेल सुरु हुन्छ यदि तपाईं A वा A को नजिकैको अक्षर लिनुहुन्छ।
प्रत्येक अक्षरसँग सम्बन्धित मानको साथ संख्या हुन्छ।
बोर्डमा वर्गहरू हुन्छन् जसले अक्षर वा शब्दहरूको मान गुणा गर्दछ, यदि अक्षर वा शब्दले त्यस मान भन्दा बढी गर्दछ। यी मानहरू दोब्बर वा तीन गुणा गर्न सकिन्छ।
यदि एक खेलाडीले आफ्नो हातमा सात अक्षरहरू प्रयोग गरेर एक शब्द बनाउन सक्छ भने, त्यो स्वचालित रूपमा points० अ .्कहरू .
स्क्रिबलमा, यो केवल शब्दहरू बनाउने मात्र होइन, रणनीति भनेको राम्रो अक्षरहरू र राम्रो वर्गहरूको साथ पोइन्टहरू संकलन गर्नु हो।
पहिलो कदम पछि, खेलाडीहरूले कम्तिमा एक अक्षर प्रयोग गर्नुपर्दछ जुन खेल बोर्डमा पहिले नै छ।
खेल समाप्त हुन्छ जब खेल अक्षरहरू समाप्त हुन्छन् र सबै खेलाडीहरूले अन्तिम चाल गर्दछन्। पोइन्टहरू जुन प्रत्येक खेलाडी हातमा रहन्छ उनीहरूको कुलबाट घटाइन्छ।
Date यदि मितिमा उत्पादित सबै स्क्रिबल टुक्राहरू सँगसँगै राखिएको भए, पृथ्वीलाई आठ पटक घुमाउन सक्षम एक निरन्तर लाइन बनाउन सम्भव छ।
1985 १5XNUMX मा अन्टार्कटिकामा दुई सिपाहीहरू क्रेभासेमा फसेका थिए। उनीहरूले उद्धार नगरुन्जेल उनीहरूले लगातार days दिनसम्म स्क्रिबल खेले।
Istics तथ्या .्कहरू भन्छन् कि ,30,000०,००० स्क्रिबल खेलहरू हरेक घण्टामा सुरू हुन्छन् जुन बितन्छ।
Sc Scrabbrle उत्पादन भएको अन्तिम भाषा वेल्श हो, जसको संस्करण २०० in मा प्रस्तुत गरिएको थियो।
• यो अनुमान गरिएको छ कि त्यहाँ कम्तिमा एक मिलियन हराएको खेल टुक्रा संसार भर छरिएका छन्।
1993 १ XNUMX XNUMX • मा, उत्तर अमेरिकाको आधिकारिक स्क्रिबल डिक्शनरीले सबै अपवित्रता र जातीय स्लुरहरू प्रतिबन्ध लगायो।